Home News Aqalka Sare oo Wax Laga Xumaado Ku Tilmaamay Shaqsiyadka Baahinaya In Gudoomiye...
Aqalka Sare oo Wax Laga Xumaado Ku Tilmaamay Shaqsiyadka Baahinaya In Gudoomiye Jawaari uu Lacag Qaatay Si uu Isku Casilo
Waxa soo baxaya Xildhibaano iyo Shaqsiyaad kale oo ka been shegaya Gudoomiyaha Golaha Shacaka ee Is casilay Prof Jawaari in uu qaatay lacag sidaasi uu saakay u gudbiyay is casilaadiisa.
Senetor Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Golaha aqalka sare ee dalka ayaa sheegay in uusan tuhmeynin in uu guddoomiyihii hore ee Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu qaatay lacag.
Senetor-ka ayaa sheegay in Guddoomiye Jawaari uu qaatay go’aan odaynimo hayeeshee waxaa uu sheegay in aysan jirin tuhunka qaarkii ee magaalada ku jira.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari uu u fududeeyay dadka iyo dalka islamarkaana go’aan gaaray xilli adag.
Waxaa uu sheegay in ay ka baqayeen in dalka ay siyaasad xumo hor leh ka dhacdo,waxaana uu bogaadiyay go’aanka uu qaatay Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Kooxda Qoyaano Qaran aya damaceeda uu u muuqda mid ay ku doonayaan in ay la wareegaan hey’ada Sharci dajinta dalka,iyagoo qas ka dhex bilaabay Golaha Shacabka waxaana uu dalka uu galaya Xaalad ka duwan Xaalada hada iyado ay qorsheynayaan in ay sameystaan Golo ay gacanta ku hayaan oo u afduuban.